အင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါဆိုင်ရာပါမောက္ခ Carlo Foresta (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်မှပေါက်ဖွားသည်
လွန်းကအင်တာနက် Porn သင်ျခြိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ Urology ပါမောက္ခ Carlo Foresta (2011)
သုတေသီများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းကိုပြုလုပ်သောလူငယ်များသည်ပုံရိပ်ဖော်များနှင့်တဖြည်းဖြည်းခုခံနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ANSA သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့သည်။
"လိင်မှုကိစ္စကိုညစ်ညမ်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကတုံ့ပြန်မှုနည်းခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ထို့နောက်လိင်စိတ်နည်းလာသည်။ နောက်ဆုံး၌စိုက်ထူရန်မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း" Andrology နှင့်လိင်ဆိုင်ရာဆေးပညာ (SIAMS) ၏အီတလီလူ့အဖွဲ့အစည်း Carlo Foresta ကပြောကြားခဲ့သည်။
သူ၏အဖွဲ့သည်အီတလီအမျိုးသား ၂၈၀၀၀ ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရလူပေါင်း ၁၄၀ ကျော်သည်လိင်မှုဆိုင်ရာအနိုးရီးယားရောဂါလက္ခဏာများလက္ခဏာများပြခဲ့ပြီး ၁၄ နှစ်အစောပိုင်းကလိင်မှုကိစ္စကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
သို့သော်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုအမြဲတမ်းမရှိသောကြောင့်သတင်းကောင်းအချို့ရှိခဲ့သည်။ "သင့်တော်တဲ့အကူအညီနဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းပြန်လည်နာလန်ထူလာနိုင်ပါတယ်။ "
ရောမမြို့၌ကျင်းပသည့် SIAM ၏နှစ်ပတ်လည်ကွန်ဖရင့်၌တင်ပြသောအခြားအချက်အလက်များအရဂျာမန်များသည်ဥရောပ၌အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုကိုအများဆုံးစားသုံးသူများဖြစ်ပြီးအင်တာနက်သုံးစွဲသူ ၃၄.၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် smut ကိုကြည့်ရှုရန်ဝင်ရောက်ကြသည်။
ပြင်သစ်ရှေ့ဆက်စပိန် (33.6 ရာခိုင်နှုန်း) နဲ့အီတလီ (32.4 ရာခိုင်နှုန်း) ၏ဒုတိယ (28.9 ရာခိုင်နှုန်း) နေရာတွင်ရှိသည်။
စစ်တမ်းအပေါ်မူရင်းအီတလီဆောင်းပါးများကိုတ Link ကို
စစ်တမ်းအပေါ်အီတလီဘလော့ဂ်မှ Link ကို ဒေါက်တာ Carlo Foresta ကျဆင်းနေလိင်စိတ်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတို့အတွက်ဆေးဝါးကုသမှုရှာကြံလုလင် 70% နှစ်ပေါင်းမိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများအတွက်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်ရှိရာ။
အီတလီအရင်းအမြစ်နောက်ထပ်စာရင်းဇယားပါဝင်သည်: အများဆုံးမကြာခဏသုံးစွဲသူ, 73% လူဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ 3.9% 13 နှင့် 5.9 များ၏အသက်အရွယ်ကြားရှိ 14-18 bracket ကနှင့် 22.1% ထဲမှာ, 25-34 အသက်အရွယ် bracket ကအတွက်% 25.4 မှမြင့်တက်, 35 turn မတိုင်မီတချို့ကလူများ, 44% ကိုစတင်ပါ။ ဤသည် 20.1 နှင့် 45 အကြား 54% မှပယ်ကျရောက်နှင့် Over-12s ကြားတွင် 55% ပယ်ချ။
အဆိုပါ Siam စစ်တမ်းအပေါ်အခြားဆောင်းပါးများနဲ့လင့်ခ်:
အခြားအီတလီဗားရှင်း Link ကို
၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီလ မှစတင်၍ ဒေါက်တာ Foresta သည်ယောက်ျား၏လိင်မှုဆိုင်ရာအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆက်လက်လေ့လာပြီးသူ၏တွေ့ရှိချက်များကိုအစီရင်ခံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဤအပိုင်းအောက်ရှိဆောင်းပါးနှစ်ခုကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ပါတို့ရှိသည်။
လာမည့်လေ့လာမှုများဖော်ပြဟောပြောခြင်း - Urology ပါမောက္ခ Carlo Foresta, မျိုးဆက်ပွား Pathophysiology ၏အီတလီ Society ၏ဥက္ကဋ္ဌတို့က - အဆိုပါဟောပြောပွဲ longitudinal နှင့် Cross- အပိုင်းလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုပါရှိသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အထက်တန်းကျောင်းဆယ်ကျော်သက်များ (စာမျက်နှာ ၅၂-၅၃) ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ လေ့လာမှုက ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမပြည့်ဝမှုသည်နှစ်ဆတိုးတက်ခဲ့ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှာ ၆၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့လိင်၏ပွောငျးလဲကြုံတွေ့ကြောင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ရာခိုင်နှုန်း: 2004 / 05: 7.2%, 2012 / 13: 14.5%
အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များ၏ရာခိုင်နှုန်း: 2004 / 05: 1.7%, 2012 / 13: 10.3% (ကြောင်း 600 နှစ်များတွင်တစ်ဦး 8% တိုးလာမယ့်)
Foresta သည်သူ၏လာမည့်လေ့လာမှုကိုလည်းဖော်ပြသည်။လိင်မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒနမူနာသစ်ပုံစံများ 125 ငယ်ရွယ်အထီး, 19-25 နှစ်ပေါင်း"(အီတလီနာမည် -"Sessualità mediatica အီး nuove Form di patologia sessuale Campione 125 giovani maschi“) ။ လေ့လာခဲ့သောလေ့လာမှုမှရလဒ်များ (စာမျက်နှာ ၇၇-၇၈) Erectile ရာထူးအမည်မေးခွန်းလွှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း, ကြောင်း r ကိုတွေ့ရှိရegular porn အသုံးပြုသူများ erectile functioning ဒိုမိန်း၏အောက်ပိုင်း 50% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဒိုမိန်းပေါ်တွင်အနိမ့်နှင့် 30% သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
လေ့လာမှု - ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ - လိင်မှုဆိုင်ရာခေတ်သစ် (၂၀၁၅) - ဤအီတလီလေ့လာမှု urology ပါမောက္ခကပူးတွဲရေးသားအထက်တန်းကျောင်းအပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ် Carlo Foresta, မျိုးဆက်ပွား Pathophysiology ၏အီတလီ Society ၏ဥက္ကဋ္ဌ။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ် Non-စားသုံးသူအတွက် 16% (နှင့်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်းစားသုံးသူများအတွက် 0%) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသညျ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတစ်ပါတ်အစီရင်ခံစာတစ်ကြိမ်ထက် porn ကိုပိုလောင်သောသူတို့၏အမျိုးအကြောင်း 6% ။ လေ့လာမှုမှ:
“ ၂၁.၉% ကဒါကိုပုံမှန်လို့သတ်မှတ်တယ်၊ ကအလားအလာအစစ်အမှန်ဘဝမိတ်ဖက်ဆီသို့ဦးတည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းစေကြောင်း 10% အစီရင်ခံစာနှင့်ကျန်ရှိနေသေးသော, 9.1% စွဲတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာသတင်းပို့ပါ။ ထို့အပြင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲသူများ၏ ၁၉% သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုအစီရင်ခံကြပြီးပုံမှန်စားသုံးသူများအကြားရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၅.၁% အထိတိုးလာသည်။ ”
ROME - ဝက်ဘ်ပေါ်၌လိင်များလား။ ဤသည်ရငျးနှီးနယ်ပယ်၏ရောဂါ, စိတ်ကူးယဉ်နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး - compulsive ရောဂါဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ရှေ့မှောက်၌များသောအားဖြင့်ပုံရိပ်ကိုပုံဖော်နေသောနှစ်ခုမှလူငယ်တစ် ဦး သည်အန္တရာယ်ရှိသည်။ အသက် (၁၉) နှင့် (၂၅) နှစ်ကြားလူငယ် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်အီတလီနိုင်ငံအန္ဒရိုဒီးယားနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဆေးပညာ (Siams) မှဖွဲ့စည်းထားသော Andrology Androlife (အီတလီနယ်မြေတစ်ခုလုံးတွင် ၄၀၀၀) ကာကွယ်တားဆီးရေးစီမံကိန်းကိုချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ "hot site" ၏အသုံးပြုသူ။ အချက်အလက်များကို Lecce သို့သွားသော Siams ၏ X National Conference သို့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ကလေးများအကြားကျယ်ပြန့်အလေ့အထ တစ်လလျှင် ၂ ကြိမ်မှတစ်ပတ်အကြိမ်အကြိမ်၊ ပျမ်းမျှမော်နီတာရှေ့တွင် ၁၆ မိနစ်ခန့်နေနိုင်သည်။ Padova ဆေးရုံတက္ကသိုလ်၏လူ့မျိုးပွားမှုရောဂါဗေဒဌာန၏အကြီးအကဲ Carlo Foresta ဦး ဆောင်သောလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကလိင်မှုဆိုင်ရာမြင်ကွင်းများပါ ၀ င်သော portals အသုံးပြုသူ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုဆိုသည်။ ၁၄% သည်ပုံမှန်အားဖြင့် visit ည့်သည်များဖြစ်သည် ဆိုဒ်များနှင့် 2% တိုင်ကြားချက်ပြီးသားစွဲ။ Paduan သည်ထိုလူငယ်သုံးစွဲသူများ၏တကယ့်လိင်မှုကိစ္စကို porn site များနှင့်အသုံးပြုသူမဟုတ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
အဘယျသို့ပေါ်ထွက်လာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခဲ့ စစ်မှန်သောအသက်တာ၌, နှစ်ခုအမျိုးအစားအကြား။ non-အသုံးပြုသူများအ 83% အသုံးပြုသူများသာ 70% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, စာရွက်များအောက်တွင်ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုရှိသည်။ အလိုဆန္ဒ၏ဆုံးရှုံးမှုအတွက်သိသာကွဲပြားခြားနားမှု (အခြားများ၏အသုံးပြုသူ 13% vs 1%), အော်ဂဇင်ရဲ့ precocity (13% vs အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ 9%) ။ အများဆုံးမကြာခဏဧည့်သည်များထဲတွင်ကြောင်း 20% ပင်ထိုနေ့အတွက်မျိုးစုံ masturbatory လှုပ်ရှားမှုဟုပြောပြသည်။
စွဲလမ်းမသာအမြင်အာရုံဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်မီဒီယာအတွက်လိင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကိုမှန်ကန်၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်ယူမယ့်။ အများဆုံးအင်တာနက်ဆိုက်များသို့တက်ရောက်ရန်သူလူငယ်များ Auto-ကာမကိုပိုမိုတင်းကြပ်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်လျော့နည်းမကြာခဏလိင်အစစ်အမှန်၏ပုံစံများကိုရှာကြာလော့။ လိင်မီဒီယာနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး၏ဤအသစ်သောပုံစံကနေဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအပြုအမူအကျိုးဆက်များသူတို့နှင့်အတူ 2,000 နှင့် 20 နှစ်ကြား 35 လူကြီးများ၏အလေ့အထများနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များ assiduous လေ့လာမှု၏အကျိုးဆက်များကိုလေ့လာခဲ့သူသစ်တောဦးဆောင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလေ့လာခဲ့ကြပြီ 2,000 ငယ်ရွယ် 18 နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကို၏။
ရလဒ်: လူငယ်များအန္တရာယ်မှာပို အဆိုပါ Net ကအပေါ်အညွှန်းအနီရောင်အလင်း၏အကျိုးဆက်များကိုခံစားနေရ၏။ အချက်အလက်များ၏ analysis အမှန်ပင်လူကြီးများနှင့်ကလေးများအကြားအပြုအမူများသည် Modes ၏ကြီးမားသောကွာခြားချက်ပြသထားတယ်။ ထိုလုလင်သည် 18 တစ်နှစ်ကြားရှိအတွက်တက်ရောက်သူ obsessive စွဲ၏စရိုက်များရောက်ရှိဖြစ်ပွားမှု 10% အတွက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်သာမန်အဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းဖြစ်သည်နေစဉ်။ အရွယ်ရောက်များတွင်လိင်သဘာမီဒီယာ၏လေ့လာမှုတစ်ခုစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုနှိုးဆွဖော်ပြ ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များမကြာခဏလာရောက်လူငယ်များအတွက်အချို့ကိစ္စများတွင်ရောဂါဗေဒ features တွေယူဆကြောင်းအစစ်အမှန်လိင်နှင့်အော်တိုကာမ၏အဓိကလှုပ်ရှားမှုအဘို့အရှာဖွေရေးတစ်လျော့ချရေးစေပါတယ်။ လူငယ်များနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးမာလ်တီမီဒီယာလိင်များ၏အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမဟုတ်သောသုံးစွဲသူများ anorexia လိင်, အော်ဂဇင်ပုံမမှန်, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပေါ်ပေါက်သောကိစ္စများတွင်၏ 25% အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရောဂါများနှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
17 နိုဝင်ဘာ 2012 14:03 - နောက်ဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း
အွန်လိုင်းလိင်: ပို. ပို. အန္တရာယ်စွဲမှာမြီးကောင်ပေါက်နှင့်အမျိုးသမီး
ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှု။ ခက်ခဲသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခံစားကြသောအီတလီလူမျိုးခုနစ်သန်းကျော်မှာရေကြောင်းခရီးသည်စုစုပေါင်း၏ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှသည်။ ငါးနှစ်အတွင်း ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းတိုးများလာသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏လိင်ကျန်းမာရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အသုံးပြုသူ ၂၈၀၀၀ ခန့်ကို ၂၀၀၅ မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ တိကျသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်ဤနံပါတ်များမှတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Siamsa ဥက္ကPresident္ဌပါမောက္ခ Charles Forest ဦး ဆောင်သည့်လေ့လာမှုကို ပါပူဝါတက္ကသိုလ်မှလက်တွေ့ရောဂါဗေဒကိုမွေးဖွားသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်က“ အသက် ၂၅ နှစ်အောက်လူငယ်များပါ ၀ င်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ anorexia ပါဝင်သည့်လက်တွေ့ဖြစ်စဉ်အသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Siamsa မှဖော်ပြချက်အရရေကြောင်းသွားလာမှု၏ရည်မှန်းချက်မှာကျန်ရှိနေသေးသော ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးများတွင် ၇၃ ရာနှုန်းသောအမျိုးသားများဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သည်မှာ ၂၄ မှ ၄၄ နှစ်အတွင်းဖြစ်သည်။ ” သို့သော်စိတ်ပူစရာအကောင်းဆုံး - သစ်တောအစီရင်ခံစာ - ၁၈ နှစ်အောက်မကြာခဏအွန်လိုင်းလိင်မှု၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း။ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များစတင်ဝင်ရောက်ခြင်းသည် ၁၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအကျင့်သည် ၂၅ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်မှ ၄၄ နှစ်အတွင်းအလွန်ပျံ့နှံ့သွားပြီးတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာသည်။ ”
လိင်မှုကိစ္စရောဂါများအတွက်ဆေးခန်းများသို့လာရောက်သည့်ယောက်ျားလေး ၅၀ တွင်လိင်စိတ်နည်းခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည် - ပါမောက္ခသစ်တော - နှစ်ပေါင်း ၇၀ ရာနှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏအလွဲသုံးစားပြုလေ့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုသည် ဦး နှောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုနှေးကွေးစေပြီးလိင်မှုကိစ္စကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမှလွတ်မြောက်စေခဲ့သည်။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာလိင်အပေါ်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမှုကိုပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ ”
အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်သည်အအေးနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ဆန္ဒကိုသေစေခြင်းဖြစ်သည်။ ” လိင်စိတ်နိုးထမှုသည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလုံးဝမပြည့်စုံသည့်အပြင်ရောဂါသာမကရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းစွဲသူသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကင်းဝေးသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး နှောက်များရင့်ကျက်မှုသည်ရုတ်တရက်ရပ်တန့်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည့်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရသောကြောင့်ဤရောဂါများခံစားနေရသောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်သင်ဆက်ဆံသည့်အခါ၎င်းသည် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ”
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးခန်းများတွင်ဤလူငယ်များ၏အပြုအမူအပြောင်းအလဲတစ်ခုသိသိသာသာတိုးတက်မှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ လိင်မှုကိစ္စ၊ ထိခိုက်လွယ်မှုနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအာရုံစူးစိုက်သည့်စာအုပ်များဖတ်ခြင်းနှင့်အတူဆိုဒ်များကိုလုံးဝစွန့်ခွာသွားခြင်းသည်ခိုင်မာအားကောင်းစေခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာခြင်းနှင့်တာဝန်ရှိသည်။ ”
Siamsa ၏လေ့လာမှုသည် Centig မှ Senigallia ၏မှီခိုမှုအသစ်များအပေါ်လူ ဦး ရေ ၅၀၀ ၏မှီခိုမှုအသစ်များပြုလုပ်သောယခင်သုတေသနလေ့လာမှုများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ” Cybersex စွဲလမ်းမှု၏သိပ္ပံနည်းကျစာပေတွင်မကြာခဏညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများပါဝင်သည်။ အွန်လိုင်းသို့မဟုတ် Cyber-Porn စွဲ - Lavenia၊ စိတ်ရောဂါနှင့် Nostos ၏ဗဟိုဌာန၏အကြီးအကဲကရှင်းပြသည် - လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ခွဲခြားရန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လိင်စိတ်စွဲလမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ antithetical ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုတွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသည်။ Cybersex, interact Cyber-Porn in တာဝန်ဝတ္တရား။ ပထမကိစ္စတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာစကားပြောခြင်းအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဒုတိယအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအဓိကဆွဲဆောင်သည်။ ”
"ဒီဖြစ်ရပ်နှစ်ခု - Lavenia ကဆက်ပြောသည် - ကျား, မကွဲပြားမှုလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုမှစကားပြောခန်းများ၌အမျိုးသမီးများပိုမိုများပြားလာပြီးအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအမျိုးသားများပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ အထူးသဖြင့်၊ Cybersex စွဲလမ်းမှုတွင်သုံးစွဲသူ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အသက် ၂၇ နှစ်မှ ၃၆ နှစ်ကြားအမျိုးသမီးများ၊ လိင်ကွဲလိင်ကွဲသူများ၊ အိမ်ထောင်သည် (၆၈ ရာခိုင်နှုန်း)၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ (၃၇ ရာခိုင်နှုန်း) ဖြစ်သည်။ Cyberporn အမျိုးအစားတွင် ၈၀ ရာနှုန်းသည် ၁၇ နှစ်မှ ၄၆ နှစ်ကြားအမျိုးသားများဖြစ်သည်။ လက်ထပ်ပြီး၊ အများစုမှာပညာရှင်များဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကွန်ယက်ပေါ်ရှိအမျိုးသမီးလိင်မှီခိုမှုသည် ၁၀ မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာသည်ဟုပြောနိုင်သည်။ ”
အရာတစ်ခုမှာ, ဒီကိုလည်း Quit Porn စွဲ, service မှကိုဖွင့်သောသူသည်အသုံးပြုသူများကိုအပါအဝင်ဗြိတိန် site မှဒေတာ, အွန်လိုင်း porn.According ၏ရောဂါဗေဒ form မှာအကြံပေးခြင်းအလွဲသုံးစားသောသူတို့အဘို့တစ်ပေါ်တယ်အတွက်တဦးတည်းအားဖြင့်ကောက်ယူမကြာသေးခင်ကစစ်တမ်းကအတည်ပြုခဲ့သည် သုံးကာ ပို. ပို. နိမ့်အသက်အရွယ်တံခါးခုံနှင့်အတူ, အမျိုးသမီးများနေသောခေါင်းစဉ်: ဆယ်ကျော်သက်, နှစ်ဆယ်ကျော်, ကျောင်းသားများနှင့် ပို. ပို. အမျိုးသမီးတွေပိတ်မိနေရစ်ဖို့များပါတယ်ရသောငယ်ရွယ် workers.A သိမ်မွေ့ထောင်ချောက်။
မှတ်စု: ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ဘလော့ဂ်ဟောင်းအချို့တွင် Dr. Foresta သည်ဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်ပထမဆုံးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်သည်လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်ဟုဆက်လက်ဖော်ပြသည်။ အထက်ပါနောက်ဆုံးသတင်းများအရသင်တွေ့ရှိသကဲ့သို့ Foresta ၏လေ့လာမှုများနှင့် ဒေါက်တာ Foresta ၏ ၂၀၁၄ ထုတ်ဝေသောဟောပြောပွဲအဆိုပါဖျောပွဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုတစ်ဦး hoax ဖြစ်ကြသည်။ ဒေါက်တာ Carlo Foresta တွေ့မြင် (အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါသည် ဒီ pubmed ရှာဖွေရေး) အဖြစ် 2011 ဆောင်းပါးတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ညီလာခံဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဥရောပကောင်စီ၏ပါလီမန်ညီလာခံအတွင်း 2011 စစ်တမ်းကိုးကားနှင့်ကိုးကား ဆုံးဖြတ်ချက်အဘို့ဤအဆိုကို။ စောင့်ကြည့် အဆိုပါလူငယ်တူရကီ ဒီစစ်တမ်းကိုဆွေးနွေးပါ။
များစွာသောအခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ see-, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်သောယောက်ျားဆက်ဆံဖို့စတင်နေကြသည်အဖြစ်အီတလီဆီးရောဂါပါရဂူမရှိတော့တစ်ဦးတည်းဖြစ်ကြောင်း မီဒီယာအတွက် porn-သွေးဆောင် ED: အဓိကအားကျွမ်းကျင်သူများက